Sikutshela okungabonakala kuChâteau de Chambord | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | EFrance, General
I-Los I-Châteaux de la Loire iyisikhungo uma kuziwa ekuhambeni, ngoba kunemizila yokubona amahle kakhulu futhi futhi ujabulele amadolobha namadolobha esihlangana nawo endleleni. Kulokhu sizokhuluma ngeCastle of Chambord, isigodlo esihle esiphakathi kwezivakashelwa kakhulu emizileni yeLoire Valley Castles. Lesi sigodlo esihle sasiyindawo yokuhlala yasebukhosini yekhulu le-XNUMX kanye nendawo yokuhlala yokuzingela nemikhosi.
Ake sibone ukuthi yini esingayenza sihlangane eChâteau de Chambord engakholeki futhi sizokwazi okuthile ngomlando wale ndawo engakholeki. Uma ufuna ukwenza umzila onqamula eSigodini saseLoire lesi ngesinye sezigodlo okufanele zibe phakathi kwezinto ezibalulekile zomzila wethu.
1 Umlando weChâteau de Chambord
2 Idatha yeChambord Castle
3 Isitebhisi sokugcina nesitebhisi esiphindwe kabili
4 Bheka ama-salamanders
5 Izingadi zeChambord
6 Amakamelo amakamelo
7 IChambord Castle Museum
Umlando weChâteau de Chambord
Ekufikeni kukaFrancis I wokunqoba eMpini yaseMarignan ngo-1515 wanquma ukwakha le nqaba enkulu. Le nqaba yayingahloselwe ukuba yindawo yokuhlala yasebukhosini, kodwa ukuthi ibe uphawu lwamandla oluzoba ubufakazi kuRenaissance waseFrance. Le nqaba yayisetshenziswa njengendawo yokuzingela neyephathi ngoba inkosi yayihlala eChâteau de Blois naseChâteau de Ambose. Ukwakhiwa kwayo kokuqala kwakucatshangwa nguDomenico di Cortona yize kamuva kwashintsha. Kucatshangwa ukuthi uLeonardo da Vinci angabandakanyeka, ngoba wachitha iminyaka emithathu yokugcina yempilo yakhe eChâteau de Clos-Lucé. Kusukela ngo-1981 bekuyindawo eyiGugu Lomhlaba. Ngemuva kokuthi uFrancis I inqaba ishiywe ikhohliwe kuze kube yilapho uLouis XIII eyinika umfowabo owayibuyisela.
Idatha yeChambord Castle
Le nqaba yindawo ehlaba umxhwele futhi egcinwe kahle. I- castle kuyinto symmetrical kakhulu ukwakhiwa futhi has imibhoshongo eziyisishiyagalombili, amakamelo angaphezu kwamakhulu amane, cishe izindawo ezingamakhulu amathathu zomlilo nezitebhisi ezingama-84. Okunye okugqamayo ukuthi lesi sigodlo sizungezwe amakhilomitha angaphezu kwezi-skwele angamashumi amahlanu ezihlahla namahlathi. Izingadi zalo ezingakholeki zingenye zezinto ezivame ukuheha abantu. Amakamelo ayo abuyiselwe futhi kuzo ungabona amakhulu ezinto ezindala eziyimisebenzi yobuciko eyiqiniso. Ngamafuphi, ukuvakashelwa okumangaza ubukhulu nobuhle bayo yonke into esingayibona. Le ndawo futhi iyindawo yemvelo yezilwane zasendle nemidlalo enabela amakhulu amahektha avulekele umphakathi ukuze ukwazi ukuhlola imikhondo.
Isitebhisi sokugcina nesitebhisi esiphindwe kabili
Kunezinto ezithile ku- ukwakheka kwalesi sigodlo esikhethekile kakhulu futhi esikhethekile. Isitebhisi esiphindwe kabili se-helix siyigugu lenqaba futhi siphefumulelwe nguLeonardo da Vinci, ingcweti yangempela engapheli ukumangala. Kunezitebhisi ezimbili ezisiyisa phansi esangweni lenqaba. Lezi yizitebhisi ezimbili eziphambana ngenkathi ukhuphuka ngaphandle kokuwela empeleni, yingakho ungahamba eyodwa noma enye ngaphandle kokuziwela ukuze ufinyelele phezulu.
Ekuklanyeni kwefayela le- isigodlo singabona ukuqoshwa kwamatshe okuningi futhi enye yezinto engabonakala intulo, isilwane esasibonakala simelele futhi sibalulekile. Ngakho-ke uma ufuna ukugcina imininingwane yalo msebenzi omkhulu, funa lawo ma-salamanders ngoba uzowathola aze aqoshwe ematsheni ophahla.
Le nqaba inezingadi ezinhle kakhulu zesitayela saseFrance lapho singabona khona ukunakekelwa okuhle kwemininingwane nokulinganisa. Kodwa-ke, le nsimu ibingakaze ibe njalo, ngoba yaqedwa ukubuyiselwa futhi yahlelwa ngo-2017. Namuhla singajabulela ama-roses angaphezu kwama-200, amakhulu ezihlahla namamitha otshani. Lezi zivande ezijwayelekile zaseFrance kusukela ekubuseni kukaLouis XIV sezitholakele futhi zithuthukisa ngokwengeziwe inani lalesi sigodlo esihle esizungezwe izindawo ezinhle eziluhlaza.
Le nqaba imele i-Renaissance eFrance futhi emakamelweni ayo singathola imisebenzi eyiqiniso yobuciko ngoba iyindawo enakekelwa ngempela. Kuzo sithola izibonelo ezinhle zokuphakama kweFrance, kulabo abanentshisekelo kulesi sihloko. Kepha siyabona futhi namakamelo uLouis XIV ayelele kuwo. Ngaphakathi sizobona ukuthi kuyisigodlo lapho imininingwane yokugcina inakekelwa khona ngezingcezu eziningi ezibaluleke kakhulu emlandweni.
IChambord Castle Museum
Kule nqaba sithola futhi i- iminyuziyamu enezinto eziningi zasendulo nezicucu kuwufanele ukuhlola. Kuyo singabona ukulengiswa kwekhulu le-XNUMX, izikhali zikaLouis XV, umdwebo ovela ekwakhiweni nasekudwebeni kweSavonnerie ngababhali abanjengoRigaud, Mignard noma uGirardet phakathi kwabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Inqaba yeChambord
Iziqhingi zaseMarquesas, ipharadesi